12 Siyaabood Oo Xariif Ah Oo Lagu Kordhiyo Dakhligaga Suuqgeynta Ku Xidhan | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/12 Siyaabood Oo Xariif Ah Oo Lagu Kordhiyo Dakhligaga Suuqgeynta Ku Xidhan
12 Siyaabood Oo Xariif Ah Oo Lagu Kordhiyo Dakhligaga Suuqgeynta Ku Xidhan
0 Daqiiqado 15 ayaa akhriyay
marketing affiliate waa mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee lacag looga sameeyo boggaaga. Si kastaba ha ahaatee, sida qof kastaa u samaynayo maahan habkaas aad waa in la sameeyaa. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaadan ahayn blogger, ama laga yaabee inaad rabto inaad asal noqoto. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad leedahay blog laakiin aad rabto inaad sahamiso siyaabo cusub oo aad ku ballaarin karto gaadhistaada.
Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo kor loogu qaado alaabtaada xiriirka ka baxsan blogkaaga. Mid ama in ka badan oo hababkan ah ayaa laga yaabaa inay yihiin waxa aad raadineysay si ay kaaga caawiyaan inaad lacag dheeraad ah ka hesho dadaalkaaga.
Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa waxa ay tahay suuqgeynta xiriirka la leh iyo sababta aad u rabto inaad isku daydo habab kala duwan. Markaa waxaanu dib u eegi doonaa 12 ka yar oo aan caadi ahayn (laakin wax ku ool leh) siyaabaha aad ugu qaadi lahayd istiraatijiyada suuqgeyneed ku xidhan heerka xiga. Aan bilowno!
Waa maxay Suuqgeynta Affiliate (iyo sida ay u shaqeyso)
Suuqgeynta Affiliate waa nooc suuqgeyn dhijitaal ah oo u sahlaysa shirkaduhu in ay dad badan ku gaadhaan qiime ka jaban xayaysiis dhaqameedka. Iibiyeyaashu waxay tan ku sameeyaan iyagoo magdhaba daabacayaasha qolo saddexaad, ama kuwa raacsan, horumarinta alaabtooda ama adeegyadooda.
Haddii aad leedahay baloog firfircoon, kanaalka YouTube, ama bogga warbaahinta bulshada, tani waxay kaa dhigaysaa musharrax wanaagsan si aad u noqoto suuqgeyn xiriir la leh. Xiriiriye ahaan, waxaad ku horumarin kartaa wax-soo-saarka iibiyaha meelaha aad doorbidayso. Nuxur ahaan, waxaad siinaysaa iibiyaha dhegaystayaal ballaadhan.
Relacionado: Waxaan ku qornay Buugga Suuqgeynta Xiriirinta - Hel nuqulkaaga
Marka qof wax ku iibsado kanaalkaaga, waxaad caadi ahaan heli doontaa komishanka iibkaas. Taas beddelkeeda, summada ayaa laga yaabaa inay ku siiso inaad keento horseed ama wadista taraafikada.
Iibiyuhu wuxuu ku siin doonaa xiriiriye ka kooban aqoonsi adiga gaar kuu ah. Habkaas, marka qof ka iibsado badeecad URL-kan, iibiyuhu wuxuu u nisbayn karaa iibka adiga oo ku siin kara komishanka.
Habkani khatar yar ayuu u hayaa iibiyeyaasha sababtoo ah maaha inay wax bixiyaan ilaa aad wax ka iibiso. Si kastaba ha ahaatee, waxa laga yaabaa inay faa'iido badan kuu yeelato daabace ahaan. Waxa laga yaabaa inay ku qaadato wakhti si aad u kasbato, laakiin waxaad bilaabi kartaa inaad hesho dakhli dadban adigoon dadaal badan samayn markaad sameyso.
Maxay tahay sababta aad u rabto inaad isku daydo suuqgeynta xiriirka ka baxsan ee Bloggaaga
Blogging waa mid ka mid ah siyaabaha ugu badan ee kor loogu qaado alaabada ku xidhan. Bilaabidda blog waxay noqon kartaa hab aad u fudud, waxaadna soo saari kartaa wax badan oo ka kooban adiga oo aan wax lacag ah ku bixin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad isku aragto xaalad ka dhigaysa blog-ga wax ka yar mid adiga kugu habboon. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaadan ku jeclayn qorista, ama aad leedahay xirfado kale oo aad jeceshahay inaad diirada saarto, sida samaynta muuqaal iyo sawir qaadis.
Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad ka dhistay wax soo socda meel dhexaad kale, sida goobta warbaahinta bulshada. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka shaqeysiiso boggaas intaad ka dhisi lahayd mid kale meel eber ah.
Relacionado: 16 siyaabood oo aad ku Bilaaban karto Lacag-ururinta Mareegtaada
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inay jirto sabab kale oo aad u wanaagsan oo kor loogu qaado alaabta ka baxsan blog. Suuqgeyste xirfadle ahaan, waxaa laga yaabaa inaad raadineyso inaad kala duwanaato dakhligaaga. Habkaas, haddii hal il uu ku guuldareysto, waxaad leedahay hab kale.
Dejinta kanaalo badan waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad kobciso dhagaystayaashaada. Si kastaba ha noqotee, haddii aad go'aansatid inaad ku xayeysiiso alaabada in ka badan hal kanaal, waa muhiim inaad xasuusato in diirada ay fure u tahay ganacsiga. Waxa laga yaabaa inaad si fiican uga soo noqoto maamulida hal ilaa saddex dhexdhexaad ah, halkii aad ka heli lahayd shan ama lix si aan hagar lahayn.
Si aad u noqoto suuqgeeye xidhiidhiye wanaagsan, waxaad u baahan doontaa baro dhagaystayaashaada. Waa inaad tixgelisaa meelaha ay isticmaalayaasha bartilmaameedka ahi ku badan yihiin iyo fariimaha ay ka jawaabaan. Arrimahaas waa inay wadaan inta badan doorashadaada dhexdhexaadka ah.
Sida Loo Kordhiyo Dakhliga Suuqgeynta Ku Xidhan (12 Xeeladood)
Hadda oo aad ogtahay muhiimadda ay leedahay qiimaynta dhammaan kanaalada aad heli karto, waa waqtigii aad eegi lahayd qaar ka mid ah xulashooyinka waxtarka leh. Halkan waxaa ah 12 xeeladood oo kaa caawinaya inaad ka soo baxdo tartankaaga oo aad u qaado suuq-geynta xiriirkaaga heerka xiga.
1. Ku Horumari Alaabahaaga Wargeysyada I-mailka
Maadaama ay tahay mid dhexdhexaad ah oo xooggan, iimaylku waligii ma tagi doono. Waxaad u malayn kartaa in sanduuqa iimaylka macmiilka uu yahay quudin la soo koobay oo inta badan macluumaadka khuseeya - oo ay si buuxda u maamulayaan.
Caadi ahaan, haddii isticmaaluhu uusan wax qiimo ah ku arkin iimaylka, way tirtiraan. Haddi ay wax qiimo ah ku arkin xadhkaha iimaylada ee isla shirkada, way iska baxaan. Dhanka kale, haddii ay jecel yihiin iimayllada ay iska diiwaan geliyeen, waxay aad ugu dhowdahay inay la falgalaan nuxurkooda.
Wargeysku waa iimayl joogto ah oo aad u dirto macaamiishaada. Wargeysyadu waxay caawiyaan dhisidda daacadnimada macaamiisha muddada dheer. Iimayl kasta (ama arrin kasta), waxaad siin kartaa dhagaystayaashaada cusboonaysiinta, wararka, ama tabaha iyo tabaha ugu dambeeyay ee la xidhiidha wax bixintaada.
Dhinacyada farsamada bilaabida warside ma adka in lagu maareeyo software sax ah. Tusaale ahaan, Mailchimp waxay la socotaa qalab adag oo loogu talagalay suuq-geynta iimaylka.
Dhisidda dhagaystayaal daacad ah waa qaybta ugu adag laakiin sidoo kale ugu faa'iidada badan. Sirtu waa ogaanshaha dhagaystayaashaada iyo inaad ka hadasho waxa iyaga quseeya.
Tusaale ahaan, haddii aad la wadaagto talooyinka iyo xeeladaha lacag-badbaadinta ee wargeysyadaada, waxa laga yaabaa inaad ku taliso software xisaabeed u suurtageliya isticmaalayaasha inay maareeyaan dhaqaalahooda. Marka akhristayaasha ay riixaan xiriirka xiriirka ee warsidahaaga, waxaa si toos ah loo geyn doonaa bogga alaabta ee mareegaha iibiyaha.
Relacionado: Hagaha Mulkiilaha Mareegta ee suuqgeynta iimaylka
2. Dib u eeg Alaabta Fiidyaha
Sida laga soo xigtay a Diisambar 2020 sahanka Wyzowl, 84% dadku waxay sheegaan inay ku qanceen inay iibsadaan alaab ama adeeg ka dib markay daawadeen muuqaal ku saabsan. Celceliska wakhtiga dadku ku qaataan daawashada fiidyaha todobaad kasta waa 18 saacadood. Intaa waxaa dheer, masiibada ayaa ka dhigtay 96% daawadayaasha dheeraad ah waxay u badan tahay in lagu isticmaalo fiidiyowyada internetka.
Fiidiyowga ayaa lagu doodi karaa inuu yahay dhexdhexaadinta shakhsi ahaaneed ee ugu badan. Dadku waxay arkaan sida aad u egtahay iyo sida aad u dhawaaqdo. Daah-furnaantani waxay abuuri kartaa xidhiidh shucuureed. Dhanka kale, xidhiidhkaasi wuu awoodaa ka dhig daawadayaasha inay u badan tahay inay iibsadaan waxa aad kor u qaadayso.
YouTube waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee fiidiyowyada internetka. Waxaad ka heli doontaa suuqgeynayaal badan oo xiriir la leh kanaalkan. Haddii aad waligaa maqashay qof ka hadlaya alaab oo kuu sheegay in uu jiro xidhiidh sharaxaadda, waxaa jirta fursad wanaagsan inay xiriir la leeyihiin.
Haddii aadan ku fikirin inaad hor istaagto kamarada, waxaad ku siin kartaa istaraatiijiyadan. Tusaale ahaan, waad awoodi kartaa dib u eeg alaabta aad jeceshahay Fiidiyowyada soo jiidashada leh oo geli isku-xiryadaada ku xiran sharraxaadaha.
Gerald Undone wuxuu dib u eegaa qalabka ay dadku isticmaali karaan si ay u abuuraan nuxurka YouTube muuqaalkan faaiidada leh.
Sharaxaadda fiidiyowga, waxaad ku arki doontaa labadan xiriiriye:
Sida dhammaan agabka suuq-geynta, fiidyahaaga waa inuu ku jiraa Wicitaan Ficil oo cad (CTA) kaasoo ku dhiirigeliya daawadayaasha inay qaadaan tallaabada xigta. Tusaale ahaan, waxaad weydiisan kartaa inay gujiyaan isku xirka la bixiyay si ay u iibsadaan alaabta.
Relacionado: 7 Talooyin oo loogu talagalay Qoritaanka Wicitaannada Guuleysiga ee Ficil ee Mareegtaada
3. Bilow Podcast
Warshada podcasting-ka ayaa caan ku sii kordheysa. Waxaa lagu qiyaasaa in la gaaro $95 bilyan adduunka marka la gaaro 2028.
Sida fiidiyowyada, podcasting ayaa kuu oggolaanaya inaad Sheeko soo jiidasho leh ka sheekee codkaaga. Si kastaba ha ahaatee, podcasts waxay u muuqdaan inay ka jaban yihiin kana sahlan yihiin soo saarista fiidiyowyada. Cilladda ugu weyni waa maqnaanshaha curiyaha muuqaalka, kaas oo laga yaabo inuu joojiyo dadka doorbidaya daawashada fiidiyowga.
Kahor intaadan bilaabin, waxaad u baahan doontaa inaad dib u milicsato dulucda iyo qaabka bandhigga. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa xoogaa qalab ah - makarafoon wanaagsan iyo labo sameeacadood ugu yaraan - iyo software sax ah. Nasiib wanaag, waxaad ku martigelin kartaa podcasts-kaaga WordPress. Madal Tani waxay si fiican u dhexgalaan adeegyada martigelinta warbaahinta sida Blubrry.
Waxaad kugula talin kartaa badeecad ama adeeg ku habboon dhacdo kasta oo waxaad ku bixi kartaa xiriirinta qoraallada. Intaa waxaa dheer, waxaan ku talinaynaa in la sameeyo jadwal joogto ah (tusaale, hal dhacdo todobaadkii). Tani waxay kaa caawin kartaa in dhagaystayaashaada ay ku mashquulaan macluumaadkaaga, taas oo kordhin karta dakhligaaga suuqgeynta xiriirka la leh.
Relacionado: Hagaha Tallaabo-tallaabo: Sida Loo Bilaabo Podcast-ka WordPress
4. Kobcinta Alaabooyinka Baraha Bulshada
Suuqgeynta, waxaad aadeysaa halka ay macaamiishaadu joogaan. Dalka Maraykanka, 82% dadweynaha wuxuu ku firfircoon yahay ugu yaraan hal profile warbaahinta bulshada.
Xataa uma baahnid inaad yeelato degel kuu gaar ah si kor loogu qaado wax soo saarka ee warbaahinta bulshada. Taa baddalkeeda, profile-yadaada iyo boggaga ganacsigu waxay u dhaqmi karaan sidii aaladahaaga ugu muhiimsan. Waxa muhiimka ahi waa in aad doorato kanaalka u taagan midowga ugu fiican inta u dhaxaysa alaabta aad xayaysiiso iyo daawadayaasha aad beegsanayso.
Tusaale ahaan, Adeegga TikTok Inta badan waxay ka kooban tahay Jiilka Z. Sidaa darteed, tani waa inay noqotaa goobta aad dooratay haddii aad rabto inaad beegsato jiilka soo koraya.
Dhanka kale, haddii alaabada aad rabto inaad kor u qaaddo ay yihiin kuwo muuqaal ahaan soo jiidanaya, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad doorato kanaal sawir-culus, sida Pinterest ama Instagram.
Tusaale ahaan, waad awoodi kartaa u samee sawirada Pinterest oo ku dar xiriiriye xiriiriye sharaxaadda pin. Waxaad sidoo kale dhejin kartaa sawiradaada cajiibka ah Instagram. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay inaadan ku dhex dari karin xiriirinta qoraallada Instagram. Xidhiidho badan ayaa arintaa ku xaliya iyagoo xidhidhiya taariikh nololeedkooda
Relacionado: Pinterest Hagaha Suuqgeynta: Sida loo Horumariyo Ganacsigaaga
5. Qor E-buug xogwarran ah
Buug e-buug ah oo si wanaagsan loo qoray oo leh talo wax ku ool ah oo waxtar leh ayaa ku meelayn kara khabiir ku takhasusay goobtaada. Habka caadiga ah waa in la sameeyo e-buugga mid bilaash ah, inta badan beddelka ciwaanka iimaylka isticmaalaha.
Haddii aad u baahan tahay wax dhiirrigelin ah, waad aadi kartaa Amazon shidin oo eeg buugaag ka jira warshadahaaga. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad hubiso si aad u aragto inay si fiican u iibinayaan. Tani waxay ku siin doontaa tilmaam ku saabsan suurtagalnimada mawduucaaga.
Relacionado: Sida Loo Qoro Boostada Blog - Hagaha Tallaabo-tallaabo ah
Haddii ay jiraan buugag aad u badan oo ku saabsan mawduuca aad dooratay, tartanku wuxuu noqon karaa mid xooggan. Sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad aragto waxa aad ka qaban karto tartankaaga si aad uga dhigto e-buuggaaga mid soo jiidasho leh.
Markaad qorayso buuggaaga, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad ku darto xiriiriyeyaashaada siyaalo waxtar u leh akhristayaashaada. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa in la isticmaalo habka iibka jilicsan oo kaliya in la sheego alaabta halka ay khuseyso. Haddii aad buugaag ku daadiso xiriirin, waxa laga yaabaa in aad la kulanto mid riixaya oo dagaal badan, taas oo ka saari karta akhristayaashaada.
Waxa laga yaabaa inay wakhti qaadato ka hor inta aanad arkin natiijooyinka istaraatiijiyadan, laakiin waa muhiim inaad sii wadato ka shaqaynteeda. Tusaale ahaan, waxaad ku xayeysiin kartaa e-buuggaaga mareegahaaga ama bogagga warbaahinta bulshada.
6. Abuur Koorso Online ah
Sida podcasting, barashada onlaynka ayaa si degdeg ah u koraysa. Saadaasha Cilmi-baarista iyo Suuqyada ayaa lagu qiyaasay in suuqu u kori doono $ Doolarka 350 by 2025.
Goobta waxbarashada onlaynka ah ee Coursera waxay aragtay Is-diiwaangelinta ayaa cirka isku shareertay 664% horraantii 2020 marka loo eego isla muddadaas sannadkii hore.
Dhanka kale, Udemy wuxuu arkay 425% sare u kac isla muddadaas. Baahida koorsooyinka khadka tooska ah ayaa weli ah mid ka sarreeya sidii ay ahaan jirtay heerarkii faafitaanka kahor.
Iyadoo qufullada iyo xannibaadaha ay horseedeen masiibadadu aanay sii jiri doonin weligood, kan cusub dabeecadaha adduunka oo dhan ee ku wajahan barashada khadka tooska ah laga yaabaa. Isbeddellada waxbarashada khadka tooska ah, kuwa rasmiga ah ama kuwa aan rasmiga ahayn, waxay u muuqdaan kuwo joogto ah.
Tani waxay siinaysaa fursad weyn ganacsigaaga. Waxay ka dhigan tahay in dadka adduunka oo dhan ay cunayaan wax aad bixin karto. Halka abuurista koorso online ah oo tayadeedu sareyso waxay u baahan tahay qadar shaqo iyo waqti cadaalad ah, marka ay diyaar noqoto, waxaad si fudud u bilaabi kartaa goobtaada oo aad ka heli kartaa dakhli dadban.
Si aad uga faa'iidaysato isbeddelkan, waxaad u baahan doontaa inaad ku darto xayeysiisyada alaabta si aan kala go 'lahayn gudaha agabkaaga koorsada. Waxaad tan si dabiici ah u samayn kartaa adiga oo kula talisa alaabada u sahlaysa ardayda inay sameeyaan waxaad barayso.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax kaa joojinaya inaad koorsadaada sameyso ku saabsan alaabta aad rabto in aad kor u qaado. Tusaale ahaan, waxaad dadka bari kartaa sida loo isticmaalo software-ka maaraynta gaarka ah si ay si hufan ugu socodsiiyaan ganacsigooda internetka.
Koorso khadka ah oo tayo sare leh ayaa ku caawin kara dhis kalsoonida. Dadku waxay aad ugu dhowdahay inay dhegaystaan ​​talooyinkaaga haddii ay ku aaminaan. Tani waxay, markeeda, keeni doontaa iibka sare.
Waxaad ku iibin kartaa koorsada lacag yar ama waxaad ku bixin kartaa bilaash. Haddii koorsadaadu tahay mid tayo sare leh, habka labaad wuxuu u horseedi karaa saxiixyo badan.
Ka bood khadka oo hel talooyin ku jira sanduuqaaga
Hoos ku dhufo si aad isu diiwaan geliso si aad u hesho wax badan oo sida loo sameeyo iyo casharro la mid ah kan oo kale, oo laguugu soo diro sanduuqaaga.
7. Daabac Casharka
Casharrada khadka tooska ah waa hab caan ah oo lagu barto xirfado cusub si dhakhso ah. Waxay inta badan qaataan qaab maqaallo tallaabo-tallaabo ah ama sida-fiidyaha. Gaar ahaan, casharrada fiidyowgu way ka duwan yihiin fiidiyowyada dib u eegista badeecada iyada oo loogu talagalay in lagu baro dhagaystayaasha xirfad gaar ah.
Casharrada waa dhexdhexaad heersare ah oo loogu talagalay dhiirrigelinta xiriirka, hadday tahay muuqaal ama qaab maqaal. Waxaad bari kartaa dhagaystayaashaada xirfad u baahan isticmaalka alaabta aad xayaysiiso. Tusaale ahaan, waxaad bari kartaa sida loo sameeyo canshuurtooda. Kadib, waxaad u bari lahayd software-ka xisaabaadka cashuuraha ee aad horumariso.
Haddii kale, waxaad bari kartaa isticmaalayaasha sida loo isticmaalo badeecada aad horumarinayso. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad tusiso sida loo isticmaalo nidaamka maaraynta xidhiidhka macaamiisha (CRM) oo aad ku dhiirigeliso inay iibsadaan adiga oo siinaya isku xidhka xidhiidhka.
Si aad u daabacdo casharradaada, waxaad haysataa dhawr ikhtiyaar oo kala duwan. Maqaallada, waxaad isticmaali kartaa madal sida Dhexdhexaad, halkaas oo aad si toos ah u qori karto oo aad wax uga beddeli karto maqaalladaada adiga oo la soconayo tirakoobka daawadayaasha.
Fiidiyowyada, YouTube waa goob weyn, sidii aan horay uga hadalnay. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale daabaci kartaa fiidiyowyadaada casharrada boggaaga Facebook ama boggaaga.
8. Ku dheji Bulshooyinka iyo Golayaasha Internetka
Waxaan u janjeernaa inaan la kulano kuwa nala wadaaga danaha iyo aragtida. Taasi waa xaaladdu bulshooyinka internetka. Kuwani waa meelo macmal ah oo ay dadku isku dhaafsan karaan macluumaadka ku saabsan danahooda guud. Waxay kaloo awood u siiyaan isticmaalayaasha inay is taageeraan oo ay wadaagaan talada.
Bulshooyinka warbaahinta bulshadu waxay u jiraan sidii beel-hoosaadyo ka mid ah muuqaalada warbaahinta bulshada. Halkan waxaa ah tusaale bulshada Facebook oo aad u firfircoon, Sayniska iyo Technology:
Waxaad sidoo kale ka heli doontaa wax badan forumyada online internet-ka. Bulshooyinkani waxa ay u jiraan meelo ka baxsan baraha bulshada oo ah meelo ay isku dhaafsadaan xog ama talo waxtar leh. Reddit waa mid ka mid ah goobaha golaha ee ugu caansan.
Suuqgeeyste ahaan, bulshooyinka internetka ayaa faa'iido u ah ganacsigaaga. Waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa dadka kana jawaabi kartaa su'aalo kasta oo ay qabaan. Inta badan, waxaad ku haysan kartaa xiriirintaada qayb ka mid ah astaantaada si ay isticmaalayaashu u soo booqan karaan wakhti kasta.
Markaad la macaamilayso bulshooyinka khadka tooska ah, waa inaad u hoggaansantaa hab-raacyada beesha. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad si joogto ah ugu biirto macluumaadka qiimaha leh; Haddii kale, waxaad u muuqan kartaa inaad u taagan tahay oo kaliya dantaada gaarka ah.
Relacionado: 12 Siyadood Oo Looga Joojiyo Trolls Internetka inay Burburiyaan Bloggaaga
9. Bilaw Ololaha Suuqgeynta iimaylka
Waxaan horay uga wada hadalnay hal nooc oo caan ah email marketing: warsidaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira doorashooyin kale oo mudan in la eego, sida:
Ololayaasha xayaysiinta caadiga ah: Kani waa iimaylo hal mar ah si kor loogu qaado badeecad ama adeeg gaar ah.
Ololayaasha xilliyeedka: Caadi ahaan, iimayladani waxay kor u qaadaan dalabyo gaar ah agagaarka ciidaha.
Taxanaha iimaylka ee la kiciyay: Kani waa iimaylo taxane ah oo loo soo diray si isdaba joog ah iyada oo laga jawaabayo dhacdo, sida soo dejinta alaabta, jawaabta sahanka, ama saxeexa cusub.
Iimaylyada dhibicda ee iibka kadib: Kuwan waxa loo diraa daba-galka iibka si ay gacan uga geystaan ​​dhisidda kalsoonida iyo daacadnimada macmiilka cusub.
Ololayaasha dib-u-howlgelinta: Kuwani waa iimaylo loo soo diray macaamiisheeda aan in muddo ah ku hawlgelin, iyadoo la rajaynayo in laga dhigo kuwo firfircoon mar kale.
Marka si sax ah loo sameeyo, ololayaashan iimaylka ayaa aad waxtar ugu yeelan kara istaraatiijiyada suuqgeynta ee xiriirka la leh. Ka dib oo dhan, iimaylka ayaa weli ah kanaal isgaarsiineed oo awood leh. Sahan ay samaysay MarketingSherpa, 86% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay inay jecel yihiin helista iimaylada xayaysiinta ugu yaraan hal mar bishii. Boqolkiiba shan iyo toban ka mid ah ka qaybgalayaasha xitaa waxay sheegeen inay ku raaxaystaan ​​iimayllada xayaysiinta ee maalinlaha ah.
Talaabada ugu horeysa ee dejinta ololaha iimaylka waa in la saxiixo agab suuqgeyn. Mailchimp waa doorasho wanaagsan, sidii aan horay uga hadalnay. SendPulse waa qalab kale oo xoog badan oo ku siinaya otomaatig dhammaystiran ololaha oo leh shaqsiyaynta heer-qofeed.
Marka xigta, waxaad u baahan doontaa inaad soo saarto waxyaabo yaab leh, la wadaaga mudan oo aad dhex geliso xidhiidhadaada ku xidhan dhexdeeda. Waxa kale oo aad ku dari kartaa badhamada warbaahinta bulshada iyo a Iimayl u dir saaxiib isku xidhka si loo kordhiyo suurtogalnimada qaataha inuu wadaago macluumaadkaaga.
10. Iibka Xayeysiiska Onlaynka ah
Iibka xayaysiisyada khadka tooska ah ayaa laga yaabaa inay noqoto xeelada ugu halista badan ee ku jirta boostadan sababtoo ah waa inaad lacag gelisaa khadka ka hor inta aanad arkin natiijooyinka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ogtahay waxaad samaynayso, waxa laga yaabaa inaad gaadho yoolkaaga sida ugu dhakhsaha badan ee la filayo.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo xayeysiis ah oo loogu talagalay dhexdhexaadin kala duwan. Aynu ka hadalno laba nooc: Lacag-guji-guji (PPC) xayeysiis iyo xayeysiisyada kali. Labada habba waxaa loogu talagalay inay rajadaada geeyaan boggaaga guriga, bogga soo degista, ama meel kale oo loogu talagalay in lagu beddelo. Si kastaba ha ahaatee, waxay u shaqeeyaan waxoogaa ka duwan.
Xayeysiiska PPC, waxaad ku bixinaysaa khidmad yar mar kasta oo isticmaaluhu uu taago xayeysiiskaaga si uu u gaaro bogga bartilmaameedka. Aad bay ugu badan yihiin shabakadda. Waa kuwan tusaale waxa ay u badan tahay xayeysiiska PPC ee Facebook:
Dhanka kale, xayeysiisyada keligood ah ayaa aad ugu badan kuwa xiriirka la leh iyo suuqgeynayaasha macluumaadka. Guud ahaan way ka qaalisan yihiin xayaysiisyada PPC, laakiin waxay ku fiican yihiin ujeedooyinka suuqgeynta xiriirka ah. Waxaa intaa dheer, marka xayeysiisyadani shaqeeyaan, waxay noqon karaan kuwo ka jaban noocyada kale ee xayaysiinta.
Waxaad ka iibsan kartaa xayeysiis keligiis ah qof leh liiska iimaylka ee bartilmaameedsanaya dhagaystayaashaada ugu fiican. Waa kan sida ay u shaqeyso:
Marka hore, waxaad ka iibsanaysaa xayeysiis milkiilaha liiska.
Kadib, mulkiiluhu wuxuu u soo diraa iimaylka (xayaysiimaha) macaamiishooda ku saabsan alaabtaada.
Ugu dambeyntii, macaamiishu guji xiriiriyeyaasha oo, waxaan rajeyneynaa, beddelaan.
Nooc kasta oo xayeysiis ah oo aad doorato, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad wax barato naftaada marka hore si aad uga fogaato khasaaraha lacageed. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto qaar ka mid ah tirokoobyada iyo xogta ku saabsan liiska iimaylka, oo ay ku jiraan qiimaha gujiska iyo tirakoobka. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad doorato badeecada ku xidhan ee saxda ah si aad ugu dhiirrigeliso dhagaystayaashaas gaarka ah.
11. Webinarada hadda jira
Webinar-ku waa soo bandhigid online ah oo ka kooban nuxur waxbarasho. Waxay noqon kartaa mid toos ah ama loo dhiibi karaa sida muuqaal la duubay. Inta badan waxaa jira qadar wanaagsan oo isdhexgalka dhagaystayaal iyada oo loo marayo fariimaha degdega ah ama fiidiyoowga laba-geesoodka ah haddii ay tahay mid toos ah.
Sida koorsooyinka iyo casharrada, webinars-yada ayaa kor u qaadi kara kalsoonidaada iyo kartida aad u malaynayso ee indhaha dhagaystayaashaada. Waxay sidoo kale yihiin dhexdhexaadin cajiib ah oo soo bandhigaya xalka dhibaatada qaabka alaabta aad kor u qaaddo.
Webinars aad bay u fudud yihiin mana jabna in la keeno, inkastoo ay kaaga baahan yihiin inaad diyaariso wax oo aad baadho mawduucaaga. Si kastaba ha ahaatee, dhagaystayaashaadu caadi ahaan kama filayo inaad raacdo qoraal adag. Habkaas, webinars-yadani waxay u ekaan karaan kuwo aan rasmi ahayn marka loo eego goob waxbarasho oo caadi ah.
Ka dib markaad dhameysato dhalmadaada hore, waxaad dib u isticmaali kartaa fadhigaaga la duubay. Waxay u adeegi kartaa qayb kale oo ka kooban suuqgeyn si ay gacan uga geysato kor u qaadida astaantaada ama u wado taraafikada websaydhkaaga. Tusaale ahaan, waxaad ku siin kartaa isku xirka webinarkaaga la duubay ee wargeysyadaada ama waxaad ku dhejin kartaa warbaahinta bulshada.
Shabakadda internetka iyo suuqgeynta iimaylka ayaa midba midka kale xoojiya. GoToWebinar waxay soo tebisay in suuqgeynta iimaylka ay mas'uul ka tahay in ka badan kala bar diiwaangelinta webinar. Isla mar ahaantaana, u baahan ciwaanka iimaylka marka la saxiixo webinar waa hab wax ku ool ah oo lagu dhalin karo hogaan badan.
Ku ku bilow webinarkaaga, marka hore waxaad u baahan doontaa inaad doorato mawduucaaga iyo qaabka gudbinta. Kadibna, waa inaad doorataa qalabka iyo meelaha aad rabto inaad isticmaasho. Zoom, Duufaan, Iyo ClickMeeting Dhammaan waa xulashooyinka caanka ah:
Waxaad u baahan doontaa inaad dejiso taariikh iyo wakhti oo aad horumariso webinarkaaga. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanad ereyga saarin, waxaa muhiim ah in aad lahaato bogga diiwaangelinta oo kor u kacaya. Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso foomamka is-diiwaangelinta fudud oo aad siiso isticmaaleyaasha ikhtiyaar ay ku doortaan taariikhaha webinar-ka ay doorbidayaan.
12. Ku Biir Barnamijka Xiriirinta Lacag-Bixiyuhu Wicista
Waxa jira nooc kale oo xayeysiis ah oo xidhiidh la leh oo aynaan daboolin: lacag-bixin-wicista. Tani waxay xoogaa ka duwan tahay hab kasta oo kale oo aan ka hadalnay ilaa hadda.
Qaabkan, hadafku waa in aad dadka ka heshid in ay wacaan shirkadda aad xayaysiinayso. Inta badan waxaad haysataa taleefoon gaar ah oo aad la wadaagto rajada. Habkaas, shirkadu waxay u nisbayn kartaa wacitaanka adiga.
Xayeysiiska lacag-bixintu wuxuu si gaar ah ugu shaqeeyaa shirkadaha iibiya ama ballanta ballanta ku qabta telefoonka, sida muftaaxlayaasha iyo adeegyada baabuurta jiidista. Sababtu waxay tahay in samaynta wicitaanka taleefanka ay muujinayso ballanqaad wax iibsiga oo ka badan marka loo eego si fudud bogga internetka.
Tixgeli inaad ku biirto shabakad xiriir la leh lacag-bixin-wicitaan haddii aad u malaynayso inaad heli karto dadka inay soo wacaan telefoon. Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa shirkadaha oo aad waydiin kartaa haddii ay danaynayaan inay kula shaqeeyaan.
Waqtiga la Heli karo Hal-abuur
Waxaa jira siyaabo badan oo wax ku ool ah oo kor loogu qaado alaabada suuqgeyneed ee xiriirka la leh oo aan u baahnayn blog. Haddii aad u isticmaasho si aad u buuxiso degelkaaga jira ama aad gabi ahaanba iska dhaafto qorista qoraallada, mid ama in ka badan oo hababkan ah ayaa noqon kara garaacistaada xigta.
Maqaalkan, waxaanu ku eegnay xeelado xariif ah oo lagu kobcinayo dakhliga suuqgeynta ee xidhiidhka la leh. Tusaale ahaan, waxaad ku xayeysiin kartaa alaabooyinka wargeysyada, fiidiyowyada YouTube, ama baraha bulshada. Waxa kale oo aad abuuri kartaa koorasyo ​​tayo sare leh iyo webinars oo waxaad ku dari kartaa xidhiidhada xiriirka ee alaabtaada waxbarasho.
Haddii aad leedahay goobta WordPress oo aad rabto ku bilow suuq-geynta xiriirka la leh, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso fiirinta DreamPress. Our Qorshayaasha martigelinta WordPress ee la maareeyay wax ka qabso cusbooneysiinta iyo hawlaha kale ee dayactirka adiga si aad diiradda u saarto waxyaabaha muhiimka ah: kobcinta ganacsigaaga.
Ku xooji Bloggaaga DreamHost
Waxaan hubin doonnaa in balooggaagu yahay mid degdeg ah, ammaan ah oo had iyo jeer kor u kacaya si ay booqdayaashaadu kuugu kalsoonaadaan. Qorshayaashu waxay ka bilowdaan $2.59/bishii.
5 Furaha Hagaajinta Bogga ee SEO-ga Dabiiciga ah ee Maxaliga ah
10ka Isbeddellada SEO ee ugu sarreeya & Xeeladaha lagu Helo Gaadiid badan 2022